प्रदेश ५ को प्रादेशिक योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त – Radio Hatemalo FM
प्रदेश ५ को प्रादेशिक योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त
प्रकाशित मितिः ६ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:३३ March 20, 2018 हातेमालो संवाददाता
बुटवल- प्रदेश ५ को प्रादेशिक योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक श्रेष्ठलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रादेशिक योजना आयोगले तत्कालै काम थाल्नेछ । आयोगले पहिलो चरणमा प्रदेशभित्र गर्न सकिने विकास निर्माणका संभावनाहरु पहिचान गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन प्राथमिकता दिने सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
योजना आयोगमा एकजना महिला सहित २ जना विज्ञ सदस्यको रुपमा एक हप्ताभित्र नियुक्त हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद वैठकले मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा पत्रकार शेरबहादुर केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । केसी नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।
वैठकमा मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई एक हप्ता(दश दिनभित्र आआफ्ना मन्त्रालयको वर्तमान अवस्थाबारे लिखित जानकारी (सिचुएसनल पेपर) दिन निर्देशन दिएका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
‘संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित १ अर्ब २ करोड वजेट कुन कुन शिर्षकमा खर्च गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझावसहितको सिचुयसनल पेपर तयार गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ’ प्रवक्ता चौधरीले भने ।
असार १ गते प्रदेश सरकारले पहिलो वजेट ल्याउने भएकाले त्यसअघि विनियोजन विधेयक पास गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी गर्न पनि मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले बुटवल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा वर्षेनी खस्ने पहिरो रोक्न आरसीसी टनेल बनाउन उपयुक्त हुन्छ हुंदैन भन्ने अध्ययन थाल्ने पनि जानकारी दिए ।
बाँकेको डुडुवामा मानव अधिकार सुदृढीकरण परियोजना शुरु
आज मे १ मजदुरहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
एक वर्षमै बजेट भाषणमा तोकिएको लक्ष्यभन्दा ५ गुणा बढी रकम खर्च
काँग्रेसको प्रमुख सचेतकमा बालकृष्ण खाँड नियुक्त